Coronavirus wuxuu ku faafaa qof ilaa qof, markay qof taabato sirta qof cudurka qaba. Faafinta fayrasku waxay si toos ah u saamaysaa jidka gudbinta. Xiritaanka maaskaro waxay kaa horjoogsanaysaa inaad fayraska dhibcaha si toos ah ugu dhex gasho. Xusuusnow gacmahaaga si joogto ah u joojin kara fayrasku inuu galo gacmahaaga.
Maaskaro loo yaqaan 'KN95 mask' waxaa dib loogu isticmaali karaa duruufaha caadiga ah. Laakiin haddii maaskaradu waxyeello gaadhay oo ay wasakh tahay, waa in isla markiiba la beddelaa.
Ma dabooli karaa waji-xidhka KN95 ka dib jeermi-dilista kadib?
Qof shabakad ku adeegsaday cabir aad u sareeya si uu u afuufo 30 daqiiqo oo ku buufiyay aalkolo caafimaad si jeermi u dilmo una buufiyo, ka dibna si isdaba joog ah ayuu u adeegsaday maaskaro N95.
Si kastaba ha noqotee, khubaradu waxay soo jeedinayaan inaadan sidan yeelin. Dad badani waxay moodayaan inay isticmaalayaan bayaan koronto awood sare leh si ay u afuufto maaskaro muddo 30 daqiiqo ah, oo ay ku buufiso gudaha iyo banaanka maaskaroda aalkolo caafimaad oo ay rajeynayaan inay dilaan fayraska ku dheggan dusha sare oo dib u warshadeeyaan. Si kastaba ha noqotee, waxay beddeli doontaa isku-haynta fiber ee maaskaro N95 ma ciyaari doonto door difaac wanaagsan.
Haddii dadku xirtaan maaskaro N95 meel ay dad yar ku jiraan, dadku si isdaba joog ah ayey u isticmaali karaan 5 jeer, ku celi meeshii qalalan oo hawo qabooji. Looma baahna in lagu kululeeyo oo lagu buufiyo aalkolada.
Haddii dadka ku nool meel dadku ku badan yahay, sida cosbitaal, waxaa ugu wanaagsan in si joogto ah loo beddelo. Maaskarooyinka qalliinka guud laguma talinayo in la istcimaalo. 2-4 saacadood ayaa ugufiican.